Ishawari eThermostatic iSeti iMnyama eneshawa ephathwa ngesandla-IFaucets zaseKitshini eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Shower Imibhobho / Iinkqubo zokuhlamba / Ukuhlanjwa kweThermostatic Cwangcisa uMnyama ngokuHamba ngesandla
ISETYHULA ESITHEMBEKILEYO SOKWENZIWA KOMBONISO: Iqhosha lokhuseleko kuma-38 ° kuthintela ukumiselwa ngengozi kubushushu obuphezulu bamanzi; Yonwabela ishawa efanelekileyo kwaye ekhuselekileyo ngakumbi kuyilo lokhuselo lwe-scald.
IKHOLAM YOKUGQIBELA EFANELEKILEYO NOKUGUQUKA: Ikholamu yeshawari inokuba phakathi kwe-84 ukuya kwi-120 cm, kwaye ihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabantwana kunye nabantu abadala. Iindidi zokuhlambela ezinokuphakama zikunika amava okuhlamba apheleleyo.
IZINTO EZIPHAKAMILEYO: Ulwakhiwo olomeleleyo ngezixhobo ezilungileyo, i-150cm yombhobho omnyama wenziwe nge-silicone. Igobolondo ephezulu, kuvavanywa amaxesha angama-500,000, ukusebenza okuzolileyo nokuzinzileyo.
Uyilo olukhethekileyo: Intloko yeshawari ene-250x250mm ubukhulu kwipateni yokutshiza ebanzi; Ngomphezulu omnyama ophezulu kunye noyilo lwesikwere, inkqubo yokuhlamba inokulingana nesitayile sakho segumbi lokuhlambela.
UKUQINISEKISA UMGANGATHO: Njengomthengisi oyingcali weemveliso zangasese, sinikezela, ukongeza kwimigangatho ekumgangatho ophezulu, iwaranti eyandisiweyo yeminyaka emi-3. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane nathi nge-imeyile, singathanda ukukunceda.
Inkqubo yokuhlamba i-Thermostatic ngeShower Shower i ...
WOWOW Uxinzelelo oluphezulu 5 Ukuseta ishawari yeChrome Hea...